Madaxwaynaha Somaliland oo la kulmay iskaashatada warshadlayda - Halbeeg News
HARGEYSA (HALBEEG) – Madaxwaynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa madaxtooyada Hargeysa ku qaabilay xubno matalayey iskaashatada ganacsatada warshadlayda ah ee ka hawlgala deeegaannada Somaliland.
Kulankan ayaa ujeeddadiisu ahayd sidii xal loogu heli lahaa khilaaf maalmihii u dambeeyey ka dhex aloosnaa labada dhinac, kaddib markii maamulka Somaliland joojiyey cashuur-dhaaf horay loogu samayn jiray warshadlayda.
Go’aankaas ayaa waxaa si adag uga hor yimid ganacsatada, iyagoo sheegay in tallaabadaasi dhabarjab ku tahay warshadaha yaryar oo markoodii horeba wax soo saarkoodu iska yaraa.
War-saxaafadeed kasoo baxay Madaxtooyada Somaliland, waxaa lagu sheegay in labada dhinac kulanka kaddib isku afgarteen in meel dhexe laysugu yimaado si khilaafka jira looga gudbo horayna loogu socdo.
Madaxwaynaha Somaliland Muuse Biixi ayaa ka codsaday ganacsatada in ay tanaasul muujiyaan islamarkaana aysan u arkin in si gaar ah iyaga loo beegsanayo, madaaama uu socdo qorshe wax looga beddlayo nidaamka cashuuraha, kaas oo saameyn ku yeelan doona dhammaan ganacsiyada.
Dhowaan ayey ahayd markii ganacsatada iska leh warshadaha yaryar ee Somaliland soo saareen qoraal ay ku diiddan yihiin tallaabada xukuumadda Madaxweyne Biixi ku joojisay cashuur dhaaf horay loogu sameyn jiray warshadaha yayar.